လုံးကြီး ပေါက် ကိုယ်လုံး အလှနဲ့ ပုရိသတွေကို ဆွဲဆောင်နေတဲ့ မေပန်းချီ – Zartiman
မေပန်းချီ တစ်တုတ်လေး ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးတွေကို ချစ်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည် ဝေမျှပေး လိုက်ပါတယ်နော်။ချစ်တဲ့ ပရိ သတ် တွေ သဘောကျ နှစ်သက် လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်နော် …။ နောက်ထပ်လည်း အသစ်အသစ်လေးတွေ နေ့စဥ့် တင်ဆက်ပေးဦးမှာမို့ Pageလေးကို like&Follow လေးလုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော်။မေပန်းချီကတော့ လုံးကြီးပေါက် ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလွတွေနဲ့ တည်ငြိမ်ရင့်ကြက်တဲ့ မြက်နွာလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မော် ဒယ် မင်းသမီးပါပဲနော်။
ဗီဒီယို တွေခေတ် စားခဲ့တဲ့ ကာလမွာလည်း ပရိတ်သတ်တွေ တစ်ခဲနက် အားပေးမှု ဝန်းရံမှုတွေကိုရရွိခဲ့တာပါ။ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမွာဆိုရင် လည်း အပြစ်ပြောစရာ မ ရွိေ အာင် ဆေးစ က်ကျရာအရုပ်ထင်အောင် အေကာင်းဆုံးသရုပ်ဆောင် ပုံဖော်နိုင်သူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်နော်။သူမကတော့ ပြည့်တင်းလှပလွန်းတဲ့ အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းအလှတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာပါ။
ဆက်ဆီကျကျ ဖက်ရှင်မျိုးလေးတွေကို များသောအားဖြင့် ဝတ်တတ်တာကြောင့် ပုရိသတွေ ရဲ့ ဝန်ရံအားပေးမှုကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားသူ လေးဖြစ်ပါတယ်။ ယခုမှာလည်း မြင်သူတကာ ရင်အေးမေမယ့် မြန်မာဝတ်စုံ ရိုးရိုးယဉ်လေး နဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို” New year ညမှာ အ ခေါက်ကင်စားမှာဆို ကျွန်မ အခေါက်က အိတယ်. ချစ်သူ”ဆိုတဲ့ ချစ်စဖွယ် Captionလေးနဲ့အတူ ချပြထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မပေနျးခြီ တဈတုတျလေး ရဲ့ အမိုကျစား ပုံရိပျလေးတှကေို ခဈြတဲ့ ပရိသတျကွီးအတှကျ ပွနျလညျ ဝမြှေပေး လိုကျပါတယျနျော။ခဈြတဲ့ ပရိ သတျ တှေ သဘောကြ နှဈသကျ လိမျ့မယျထငျပါတယျနျော …။ နောကျထပျလညျး အသဈအသဈလေးတှေ နစေ့ဉျ့ တငျဆကျပေးဦးမှာမို့ Pageလေးကို like&Follow လေးလုပျထားဖို့မမနေဲ့နျော။မပေနျးခြီကတော့ လုံးကွီးပေါကျ ခန်ဓာကိုယျကောကျကွောငျးအလှတှနေဲ့ တညျငွိမျရငျ့ကွကျတဲ့ မွကျနှာလေးကိုပိုငျဆိုငျထားတဲ့ မျော ဒယျ မငျးသမီးပါပဲနျော။
ဗီဒီယို တှခေတျေ စားခဲ့တဲ့ ကာလမှာလညျး ပရိတျသတျတှေ တဈခဲနကျ အားပေးမှု ဝနျးရံမှုတှကေိုရရှိခဲ့တာပါ။ သရုပျဆောငျပိုငျးမှာဆိုရငျ လညျး အပွဈပွောစရာ မ ရှိေ အာငျ ဆေးစ ကျကရြာအရုပျထငျအောငျ အကောငျးဆုံးသရုပျဆောငျ ပုံဖျောနိုငျသူတဈယောကျလညျး ဖွဈပါတယျနျော။သူမကတော့ ပွညျ့တငျးလှပလှနျးတဲ့ အမိုကျစား ကောကျကွောငျးအလှတှကေို ပိုငျဆိုငျထားတာပါ။
ဆကျဆီကကြ ဖကျရှငျမြိုးလေးတှကေို မြားသောအားဖွငျ့ ဝတျတတျတာကွောငျ့ ပုရိသတှေ ရဲ့ ဝနျရံအားပေးမှုကိုလညျး ပိုငျဆိုငျထားသူ လေးဖွဈပါတယျ။ ယခုမှာလညျး မွငျသူတကာ ရငျအေးမမေယျ့ မွနျမာဝတျစုံ ရိုးရိုးယဉျလေး နဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေို” New year ညမှာ အ ခေါကျကငျစားမှာဆို ကြှနျမ အခေါကျက အိတယျ. ခဈြသူ”ဆိုတဲ့ ခဈြစဖှယျ Captionလေးနဲ့အတူ ခပြွထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဆက်ဆီကျကျ အလန်းစား ပုံစံလေး နဲ့ အပီအပြင် ကပြထား တဲ့ သဇင်ဦး ရဲ့ အမိုက်စားဗီဒီယို
နာမည်ကြီးနေတဲ့ အောင်ရဲလင်းနဲ့ နေခြည်ဦးတို့ရဲ့ Music Series ဒုတိယပိုင်းသီချင်း(ဗွီဒီယို)